Home » Nchedo njem na Mberede » 19gbọelu ụgbọelu dakwasịrị na Siberia, mmadụ iri abụọ na itoolu nọ na ya bụ ụgbọ lanarịrị okuku ahụ
19gbọelu ụgbọelu dakwasịrị na Siberia, mmadụ iri abụọ na itoolu nọ na ya bụ ụgbọ lanarịrị okuku ahụ
Standardskpụrụ nchekwa ụgbọ elu nke Russia enwekwuola ọganihu n'afọ ndị na-adịbeghị anya mana ihe mberede, ọkachasị metụtara ụgbọ elu ochie na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ, abụghị ihe ọhụrụ.
Antonov An-28turboprop ụgbọelu dara na Siberia Russia.
Aircraftgbọ elu ahụ kpọkasịrị nọ na ya bụ nke helikọpta ndị nnapụta nke Mberede.
Mmadụ iri na itoolu nọ n’ụgbọelu ahụ kpọkasịrị adaala n’ike n’ike.
Onogbọ elu ụgbọ elu nke ụgbọ mmiri nke Antonov An-28 nke ụgbọelu turboprop, nke ndị Siberia Light Aviation (SiLA) na-arụ, obere ụgbọ elu na-enye ụgbọelu mpaghara na Russia nke Siberia, furu efu ka ọ na-efe site na Kedrovoye gaa obodo Tomsk.
N'oge na-adịghị anya ka ọ gbanahụ rada, ụgbọelu ahụ dara ada nọ na helikopta ndị nnapụta nke Mberede na-ezigara ịchọ ya.
Dabere na ndị ọrụ mịnịstrị ahụ, mmadụ iri na iteghete nọ n’ụgbọelu ahụ akpọrọ ụgbọelu anwụghị n’ụzọ siri ike.
Onyeisi ụgbọelu ahụ gbajiri ụkwụ ya, mana onweghị ndị njem ma ọ bụ ndị ọrụ ya nwere nnukwu mmerụ ahụ, ma ugbu a ana-ewepụ ya ebe ọ dara.
Dabere na onye isi ụgbọ elu Siberia Light Aviation Andrey Bogdanov kwenyere na injin nke ụgbọ elu An-28 dara ada nwere ike ịda mba n'ihi oke ihu igwe.
Mbibi nke taa na-abịa ihe na-erughị izu abụọ ka ụgbọ elu yiri nke ahụ, Antonov An-26, dabara na nnukwu ugwu na ọnọdụ ọhụụ na mpaghara Kamchatka dịpụrụ adịpụ na Far East Russia, wee gbuo mmadụ 28 niile nọ n'ụgbọ ahụ.
Otu Antonov-28, otu ụdị ụgbọelu ahụ furu efu na Tomsk, dara na oke ọhịa Kamchatka na 2012, gbuo mmadụ 10. Ndị ọrụ nyocha ahụ kwuru na ndị ọkwọ ụgbọ elu abụọ mmanya na-egbu oge ọ dara ada.